के तपाई सपनामा नाग देख्नुहुन्छ ? कस्तो नाग देख्दा मिल्छ शुभ सङ्केत ? हेर्नु-होस् ! – Nepal Online Khabar
बिहिबार , माघ ६, २०७८
के तपाई सपनामा नाग देख्नुहुन्छ ? कस्तो नाग देख्दा मिल्छ शुभ सङ्केत ? हेर्नु-होस् !
साउन २८, २०७८ बिहिबार 797
सर्प र मानवको सम्बन्ध मानव सृष्टिको प्रारम्भिक कालदेखिनै चलिआएको छ। सर्पसंग सम्बन्धित कथाहरु, हिन्दु धर्मशास्त्र तथा पौराणिक कथाहरुमा समावेश भएका छन्। हिन्दु शास्त्र अनुसार सर्पलाई पूजा योग्य जनावर मान्ने गरिन्छ र हरेक वर्ष नागपंचमीमा वि’शेष पूजा गर्ने गरिन्छ। भगवान शिवले आफ्नो गलामा साँप बेरेको समेत देख्न सकिन्छ ,जुन हेर्दा हामीले साँपको धार्मिक महत्व समेत बुझ्न सक्छौ। यदि हामीले बाटोमा हिंड्दा वा केही कामको शिलशिलामा सर्प देख्दा डरका साथै शरिरबाट पसिना छुट्ने गर्छ तर यसलाई सपनीमा देख्दा,जीवनमा के कस्तो फाइदा – बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईहरुलाई बताउन जाँदै छौँ।
सपनीमा सर्प देख्दा हुने शुभ संकेत :
* यदि तपाईले सपनीमा कुनै मन्दिरमा आँखा खोलेको साँप देख्नुभयो भने यो तपाईको लागि शुभ संकेत हुने गर्छ। सपनीमा यस्तो अवस्थामा साँप देखेमा तपाईले भबिष्यमा सोचेका सम्पूर्ण कार्यहरु सिद्द हुँदै जाने छन्।
* यदि तपाईले सपनीमा कुनै रुखमा चढ्न लागेको साँप देख्नुभयो भने यो पनि तपाईको लागि शुभ संकेत हुन सक्छ। सपनीको यस संकेतले नि’कट भविष्यमै केहि शुभ कार्य सम्पन्न हुने संकेत गरेको हुन्छ। यसले तपाईको जागिरमा पदोन्नति हुने समेत संकेत गरेको हुन्छ।
* यदि सपनीमा शिवलिङ्ग माथि साँप चढेको देखेमा निकैनै शुभ मान्ने गरिन्छ। यस्तो सपनीको संकेतले तपाईको जीवनमा अधुरा रहेका कार्यहरु छन् भने भगवान शिव प्रसन्न भई ती कार्यहरु सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने मान्यता रहेको छ।
सपनीमा सेतो सर्प देख्दा अत्यन्तै शुभ हुन्छ :
* यदि कुनै गरिब व्यक्तिले साँप रुखबाट झरेको सपनी देख्यो भने यो शुभ संकेत मान्ने गरिन्छ। यसलाई अत्यधिक धन प्राप्तिको संकेत मान्ने गरिन्छ।
* यदि तपाई कुनै वि’शेष कार्यको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र बाटोमा साँपले बाटो काट्यो भने अत्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यसले आफू हिंडेको कम सम्पन्न हुने संकेत गर्दछ।
* सपनीमा सेतो सर्प देख्दा अत्यन्तै शुभ हुनेगर्छ र यसलाई धनको प्रतिकको रुपमा लिने गरिन्छ।
सपनीमा साँप देख्दाको अशुभ संकेत
*यदि सपनीमा मरेको साँप देखेमा यसलाई अशुभ मान्ने गरिन्छ। यो नि’कट भविष्यमा हुने सं’कटको सू’चक हो। यस्तो अशुभ प्रभाबबाट बाँच्नका लागि कुनै महिनाको ५ वटा सोमबार शिवमन्दिरमा गई शिवलिङ्गमा काँचो दुध अर्पण गर्नुपर्छ।
*यदि कुनै धनि व्यक्तिले सपनीमा रुखबाट झर्दै गरेको सर्प देखेमा, यो ठुलो मात्रामा धन हानी हुने संकेत हो। यस्तो सपना देखेमा आर्थिकको मामलामा सचेत रहन आवश्यक हुनेछ।
सपनीमा नाग-नगिन बीचको प्रेम देख्दा अशुभ रहने गर्छ :
* यदि तपाई घरबाट बाहिर निस्किने समयमा साँपले बाटो काट्यो भने साबधान रहन आवश्यक हुन्छ। यस्तो बेला आफू घरबाट निस्किदा सोचेको कार्य सम्पन्न नहुन सक्छ त्यसैले पुन:घर फर्केर शिव भगवानको पूजा गरेर मात्र हिंड्दा शुभ हुने गर्छ।
* यदि सपनीमा नाग -नगिन जोडीको प्रेम देखेमा अशुभको सूचक मानिन्छ। यो ठुलो मात्रामा हानी नोक्सानी गर्ने संकेत हुनेछ ।
Prevआज साउन २९ गते शुक्रबार,कस्तो रहला तपाईको दिन हेर्नु-होस् आजको राशिफल !
Nextसर्वोच्चको फैसला :- ‘मेडिकल कलेजले तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी भर्ना नगर्नु’
अब अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि विद्यु’तीय राहदानी प्रचलनमा आउने ।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माधवकुमार नेपाल बाहिरिनुलाई रुखको पात झर्नुसँग तु’लना गरेका छन् ।
शुभ समय आउनुभन्दा पहिला मिल्छ यस्तो १० शुभ संकेत, जस्ले बनाउछ मालामाल !!
मिर्गाैला क्यान्सर हुने पाँच मुख्य कारण ।
४ बर्षसम्म एउटा पनि विकास नगरेको भन्दै वडाध्यक्षलाई बिजुलीको पोलमा बा’धियो (2269)
ओलीवि’रुद्ध लड्न मलाई घचेटेर अघि बढाए, पछि फर्केर हेर्दा कोही पनि छैन :- माधव नेपाल ! (1493)
अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली भन्छन्ः हामी जोखिममा छौं, छिटो उद्धार होस् (1480)
सुन्दर देखिनका लागि कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन् यी युवती ! (1398)
मैले प्रचार नगरेर मात्र हो, लोडसेडिङ हटाएको मैले हो – टोपबहादुर रायमाझी (1061)
नेपाली फिल्ममा भिलेन बन्लान् त सुनिल शेट्टी ? (961)
यी महिना जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् करोडपति , कुन महिना जन्मिने व्यक्ति कति धनि ? जान्नु-होस् ! (900)
खेत खन्दा माटोको भाँडो भेटियो खोलेर हेर्द सबै चकित ! (893)
आदरणीय जीवन राई ज्युलाई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र न ५ (क) सभापति पदको उम्मेदवारमा सफलताको हार्दिक शुभकामना छ ।
भदौ २४ बिहीवार एवम् हरितालिका ‘तिज’,यी राशिलाई उत्तम फल प्राप्तिको योग, हेर्नु-होस राशीफल !
मानिसको क्रु’रताको हद, संखुवासभा ह’त्याकाण्ड जटिल र रहस्यमय : प्रहरी !
पाथिभरा माताको दर्शनगरी भदौ २३ गते बुधवारको राशिफल हेर्नु-होस् !
सपनामा मन्दिर गएको देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ !